Slovakia: Olana Momba Ny “Asa sa Vola” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Janoary 2012 4:05 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Magyar, Español, English
Namoaka lahatsoratra [sk] momba ny fanandramana natao tao an-tanànan'i Krompachy any atsinanan'i Slovakia ny gazety SME. Niangaviana hiditra amin'ny tetikasam-panjakana iarovana amin'ny tondra-drano ny tsy an'asa. Ao amin'io faritra manana taha ambony amin'ny tsy fananan'asa io dia efatra monja ny tovolahy nanaiky. Nandà avokoa ny hafa rehetra, nanambara fa mbola mahantra kokoa ry zareo raha mandray io asa io.
Ny tsy voalazan'ny gazety dia ny fiheveran'ny Slovaky maro fa ilay olona tsy an'asa manan-janaka maro, heverina ho manana anarana Hongroà ary miaina any amin'ny faritra atsinanan'i Slovakia dia tahaka ny avy amin'ny foko Roma.